29 Jun Read story Buuga Raaxada Guurka. by SomaliBookClub (Somali Book Club) with reads. buuga, guurka, afsomali. Nas BAABKA. Raaxada guurka. ninka naagtiisa waxa uu ku nacaa waxyaabo muhiim ah taa soo basabta in uu guursado naag kale. Laaakin mid ogoow ma’ahan inaad. 19 May Raaxada Guurka Baabka | 4aad Waxaa qoray: Sabriye Macallin Muuse Caafimaadka Galmada Ila Taliya oo Intee Jeer Baan u Tagaa.
Author: Tezuru JoJonos
Ragga feerka ciyaara mar kasta oo ay murqohoodu sii dhismaan, jirkooduna sii xoogaysto, xiniinyahoodu waa ay sii yaryaraadaan. Baaritaanno ay sameeyeen culimo fara badan oo ku xeel dheer cilmiga caafimaadka gaar ahaan cudurrada dumarku, waxay caddeeyeen in ugxantu ay ka tagto ugxan-sidaha 15 maalmood kahor caadada xigta, ama haddaynu si kale u niraahno maalinta 15aad kahor inta uusan imaan dhiigga soo socdaa.
Ha yeeshee culimada diinta qaarkood iyo dhakhaatiirta caafimaadka intuba, waxa habboon bay leeyihiin in hooyada cusub nasasho la siiyo muddo dhowr usbuuc ah, intay wax waliba caadigoodii kaga soo noqonayaan.
Maacuunta, gidaarrada iyo daaqadaha jikada oo aan sidii raxaada baahnaa loo nadiifin, daaqadaha qolalka gaar ahaan qolka jiifka iyo kan carruurta oon la nadiifin, si maalinle ahna aan loo furin si hawadu isu beddesho nakhaskuna uga baxo, dharka carruurta oo inta la mayro, dabeeto meel lagu raseeyo iyadoon la kaawiyadeyn iyo wixi la mida, waa sifooyin ay ka siman yihiin guryo raxxada oo Soomaaliyeed.
Rasuulkeennii suubbanaa kolka uu Salaadda tukanayo, hadduu ilma yari ooyo waa uu yuurka jiray si aanay ilmahaa hooyadii oo Salaadda kula jirtaa uga welwelin. Waxaa laga yaabaa in hadalkaasi uusan mar kasta sax noqon karin, marka laga eego nin kasta iyo naag kasta, waxase uu sax noqon karaa kolka uu arrinku joogo labada isqaba!
Raaxada Guurka – Qaybta 4aad – Wajibad
Ubadku gujrka ha ahaado ama gabare, waxa uu billaabaa inuu isweydiiyo, waalidkana weydiiyo waxyaabo badan oo jinsiga la xiriira. Fill in your details below or click an icon to log in: Marxaladdani waxay ka billabataa dhammaadka guga toddobaad, raadada ku dhammaataa dhammaadka guga afar iyo tobnaad. Wuxuu jecelyahay inay u ahaato dhammaan dumarka aynu soo sheegnay oo laysku dardaray, maalintuu doonana noocuu doono ka helo. Sidaasi bay haddaba ku xaddidi kartaa islaantu wareegga dhiiggeeda caado, iyada oo taasi ka tixraacaysana ay sii sheegi kartaa goorta ay ugxamayn doonto.
Inuu yahay qof jira oo madax bannaan si uu dadka u tuso, waxa uu ku dhaqaaqaa wax kasta oo suuragal ah. Saaxiibow waa runtaayoo waan soo arkay dumar badan oo cadcad, welibana quruxdooda haddaad indhaha saartid aad halkaaga iskula shubeysid, guurna igu baryayey, ha yeeshee naagihii Soomaalida ka sokow afkii, dhaqankii, diintii iyo dhiiggii oo aynu wadaagno, waxa aan marnaba lagu gaareynin tii nadaafad ahayd. Waxa ku beermaysa cabsi uu ka qabo ilmaha cusub, sabatoo ah waxa uu ku ciriirinayaa wax kasta.
Most Related DIALOGUE WITH GOD MARK VIRKLER PDF
Ma jirto dunida meel aan Waadiga Niil iyo waddamada ku dhowdhow ahayn oo laga yaqaan caadadaasi. Kolka uu muruqa gumaarku adag yahay waa uu isku laablaabmaa oo isku majuujismaa, kana dhigaa cambarka mid adag oo wada seed ah, arrintaasi oo lagama maarmaan ah kolka la doonayo galmo laga dhergo, haddiise uu muruqaasi dabacsan yahay cambarku awood ma laha uu ku majuujismo oo ku laablaabmo, geedka ninkana ku liso.
Hadduu xitaa sidaas baan rabaa sidaana iga daa oran lahaa hawshii galmada ayaaba saa ku dhadhan beelaysa. Ay indhaha isaaraysaba intay shaqaday haysay faraha ka qaaddo bay caay af-labadii iila soo fariisataa.
Sida loo badan yahay muddada u dhaxaysa raaxxada iyo ummulistu waxa weeye maalmood, waxayse dhibaato ka imaanaysaa sidii lagu xaddidi lahaa maalintuu uurjiifku caloosha hooyadii raxaada.
Hadday sabool yihiin Eebbe asagaa deeqdiisa ku hodminaya, Eebbana waa kii deeqdiisu dadka ku wada aaddo, cid walbana duruufteeda ka warqaba. Waxa kale oo ay rumeysan yihiin in dhuuqmadu ay ka dhigan tahay hibadii ugu dambeysay ee ay dumarku ragga siiyaan, oo waxabay uga dhigan tahay iyaga oo u galmooday. Haddii haddaba midkood dareemo rabitaan ah inuu ka jawaabo hadal uusan jecleysan oo kaga yimid kan kale, waa inuu liijaanka ku adkeeyaa naftiisa, una diidaa inay bixiso jawaab beddel ah, xitaa haddii acsaabtiisa iyo baahidiisuba ku kallifayaan jawaabtaasi.
Cumar RC waxa uu dhihi jiray: Haddiise gurigu yahay goob heesaha lagu dhegeysto, lagu qoob-ka-cayaaro, xafladahana lagu oogo, waxad arkaysaa ilmihii oon shan jir gaarin oo heesaya oo qoob-ka-ciyaaraya oo hadba dhinac iska rogaya, diin iyo duruufahaasina kala fog.
Eebbe waxa uu aayaddiisa ku leeyahay:. You are commenting using your WordPress. Qoriga yar ee dhexda la suray waxa loogu talo galay in kolkay faruuryuhu isku baantaan ay reebaan dalool ay inantu ka kaadiso kolkay qaan gaartana dhiigga caadadu uu kasoo baxo.
Cambarku kolka uu caadiga yahay waxa uu awood u leeyahay inuu dilo jeermis kasta oo dibadda kaga yimaada isaga oo adeegsanaya dheecaanno sun ah oo uu soo daayo. Waa tan labaade, waxa laga yaabaa inay haweeneydu qubaysato markay afartan maalmood u dhammaadaan siday caadadu ahaan jirtayha yeeshee dhiiggii weli ka socdo, caadadiina aanay weli ka dhammaan. Waa inaanay joojin layliga ilaa iyo inta koorasku ka dhammaanayo, isticmaashaana mar kasta oo ay kaadshayso ama galmo ka qaybqaadanayso.
Most Related EL CARTEL LIBRO DE JESUS BLANCORNELAS PDF
Waxaynu hore usoo sheegnay inay xawadu jirka haweenta ku jiri karto muddo 48 saacadood. To find out more, including how to control cookies, see here: Wararku waxay sheegayaan in Carabtu adeegtooyinka dumarka addoomaha ah oo qura ay gudi jireen.
Kolkuu sagaal jirsado weeyso iyo salaad buuxda ayaa laga doonayaa.
Ninku intuu xaaskiisa labadeeda lugood dhex galo, oo labadiisa gacmood dhinacyada ka kala mariyo, uu dabeeto ku dul dhabbacdo. Halka ubadka gaalada ee guruka saqiiraa ay Jannada ugu adeegayaan Muslimiinta guud ahaan. Sabriye Macallin Muuse Xigasho: Waa inaan wax kasta oo khalada faraha looga qaadin, isla markaana waa inaan wax kasta oo gef ah oo ka dhaca lagu canaanan.
Waxa raaxad weriyey inu Rasuulku qaadi jiray, koolkoolin jiray lana cayaari jiray labada wiil ee uu awoowaha u ahaa Xasan iyo Xuseen. Haddaba annaga oo mowduuca dib ka quusi doonna, bal marka hore aan ku billowno macluumaad guud oo ku saabsan jinsiga.
Waxa laga yaabaa in ilmuhu uu kula cayaaro qofka weyn isagoo garka ka qabsanaya amaba marada uu xiranyahay. Waxyaabaha ay raggu dumarka ku raacaan waxaa kamid ah timaheeda oo intay dheeryihiin hawadu midmid u laliso, mana ka helaan qaababka shanlleysi feerasho ee dad sameega ah ee markii la taabtaba duma.
Markanna aynu fiirinno waxyaabaha dhacaya kolka gabadha la gudayo. Dadka Qurayshta ah iyaga waxa caado u ahayd inay dumarkooda qaab kasta guurak galmoodaan uguna raaxaystaan, hadday ahaan lahayd soo jeed, sii jeed, jiif iyo joog intaba.
Sidaa daraadeed bay leeyihiin sunnada Nabiga ee saxiixa ah meelna kama soo galo gudniinka habluhu, waxa lagu doodayo oo xadiisyo ku saabsan habla rwaxada gebigood waa wada daciif aan shir lala tegi karin, arrinkuna ma sii dhaafsana caado uu Islaamku u daayey waqtiga iyo horumarka cilmiga ama iyagu ha toosiyaan ama ha tiraane. Ilaah raxxada uu lacnaday haweenka is shaabbadeeya iyo kuwa wax shaabbadeeya labadaba.
Labadii wiil baa dhashay weyna isla koreen. Waxaynu ogsoonnahay in noolaha oo dhami aanu isu galmoon ilaa uu hordhac shukaansi sameeyo. Faraaciintu kolkay Suudaan Dhulkii Nuubiyiinta qabsadeen raaxava kalena boqorradii Nuuba ay Masar qabsadeen bay caadada gudniinka Fircooniga ahi waxay ku fidday Waadiga Niil, ilaa iyo waqtigaan la joogana way ka jirtaa.
DASTUURKA CUSUB EE SOOMAALIYA EBOOK